Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nokuthenga ngaphakathi nohlelo | IPhone iindaba
Ngokuqinisekileyo uyazi ukuba ziintoni eziThengiweyo eziHlangeneyo, ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo okanye ukuThengwa ngaphakathi kwesicelo kuba ixesha elithile ngoku liyanda ngokusetyenziswa kweVenkile ye App kwaye ikwangumthombo ongenakuphela weendaba ngenxa yezikhalazo zabathengi okanye uxinzelelo yimibutho elawulayo. ukuphucula inkqubo. Kodwa ngaba uyazi yonke into ngabo? Kwaye okubaluleke kakhulu,uyazi ukuba ungaqinisekisa njani ukuba akukho mntu uzisebenzisayo engazi? Sichaza yonke into kuwe.
1 Ayizizo zonke izinto ezithengwa ngaphakathi nohlelo ezifanayo
2 Ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo kusebenza njani
3 Misela izithintelo kwisixhobo sakho
Ayizizo zonke izinto ezithengwa ngaphakathi nohlelo ezifanayo
Xa ukhuphela usetyenziso, ngokubanzi simahla (nangona ungabandakanya abo bahlawulelweyo) jonga ngaphezulu nje kweqhosha lokuthenga kuba uphawu oluncinci luya kuvela olunokuthi «Nikeza ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo«. Oku kuthetha ukuba olu setyenziso ludibanise ukuthengwa. Ukuba uyehla kancinci, uza kubona ukuba imenyu "yeeNtengo eziHlanganisiweyo" iyavela kwaye ngaphakathi, zonke iinketho zokuthenga onazo ziyasebenza. Sijongene nesicelo se- "freemium", umxube we "simahla" (simahla) kunye "nepremiyamu" ekuchongwe ngayo ezi zicelo zasimahla kodwa ezingezizo kuba zinikezela ukuthengwa ngaphakathi.
Ayizizo zonke izicelo eziziphatha ngokufanayo ngokuthenga okuhlanganisiweyo, okanye mandithi, ayingabo bonke abaphuhlisi abenza okufanayo. Kukho izicelo ezizodwa ezinikezela ngamava amnandi ngaphandle kokuthenga nantoni na, kodwa ezibonelela ngamathuba okuphucula usetyenziso (okanye ukunciphisa ixesha lokulinda lemidlalo) enkosi kolu kuthengwa kwangaphakathi nohlelo. Kodwa kukwakho nabo banikezela "simahla" into engasebenziyo ngokufanelekileyo ngaphandle kokuba uchitha imali uthenga ngaphakathi kwesicelo. Aba ngabo basebenzisa gwenxa inkqubo ethi kwelinye icala isengumthombo wengeniso esemthethweni kubaphuhlisi.
Ngaba zonke izinto ezithengwa ngaphakathi nohlelo ziyafana? Suku, singahlulahlula sibe ngamaqela amathathu:
Abo banikezela ngento esetyenzisiweyo, ezinje ngeemali, iintliziyo, iidayimane ... Uyayithenga, uyichithe kwaye kufuneka uyithenge kwakhona ukuba ufuna ngaphezulu. Oku kuthenga akusetyenziswanga xa ufaka umdlalo kwakhona kwaye awahambelani phakathi kwezixhobo.
Ezo zivula izinto, ezinje ngabalinganiswa, amanqanaba ... Ezi zihlala zibuyiselwa, ukuze uzithenge kube kanye kwaye ukuba uwufaka kwakhona umdlalo ungawuvula kwakhona ngaphandle kokuwuhlawula kwakhona.
Ukuthengwa okuqhubekayo, okufana nokubhaliselwa kwamaphephancwadi, okuhlaziywa inyanga nenyanga ngaphandle kokuba ubhalisile.
Ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo kusebenza njani
Into eqhelekileyo kukuba ngexesha lomdlalo, xa uzama ukufumana into ngefestile efana nale uyibonayo kulo mfanekiso iyavela. Xa ucofa kwiqhosha, kuya kuvela iwindow apho kuya kufuneka uqinisekise ukuthengwa ngokufaka igama eligqithisiweyo leVenkile yeApp. Oku kuhlala kunjalo, kodwa into abantu abaninzi abangayaziyo yile yokuba ngokuzenzekelayo IOS igcina isitshixo semizuzu eli-15 emva kokuthenga, ke ukuba uthenga into (nokuba isimahla) kwaye ufake ipassword, kangangemizuzu eli-15 nabani na unokuthenga nantoni na (kwaye ngamanye amaxesha yimali eninzi) ngaphandle kokuphinda ufake ipassword. Yenye ye "ukusilela" kwenkqubo abaninzi abangayaziyo kunye nemvelaphi yeengxaki ezininzi ezipapashwa kwi-intanethi. Ngokucacileyo oku kungatshintshwa kwaye siza kukubonisa indlela.
Misela izithintelo kwisixhobo sakho
I-iOS ibonelela ngesakhono sokuthintela imisebenzi ethile ukuze ingafikeleleki ngaphandle kwephasiwedi, kwaye ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo yenye yezo zinto ekufuneka zithintelwe ngumntu wonke ukuthintela iingxaki. Ukusuka kuseto> Imenyu ngokubanzi unokusebenzisa izithintelo ngokufaka iphasiwedi enamanani ama-4. Zimbini izinto ezibalulekileyo ezinokuthi ziqwalaselwe ngokokuthanda kunye neemfuno.
Cela iphasiwedi ngokukhawuleza-Ifanele ukuba ibe yinto emiselweyo ye-iOS, kodwa ayisiyiyo. Ngokuzenzekelayo, njengoko benditshilo ngaphambili, i-iOS igcina ipassword yemizuzu eli-15, eyingozi kakhulu. Khawufane ucinge ukuba uthenga into kwaye kwangoko unike i-iPhone yakho okanye i-iPad umntwana wakho. Unemizuzu eli-15 yokudibanisa ikhadi lakho letyala elinxulumene neakhawunti yakho yeTunes. Ngaphakathi kwimenyu ebesiyibonisile ngaphambili, skrolela ezantsi kancinci kwaye uza kubona ukhetho "Cela iphasiwedi", khetha "Ngokukhawuleza". Ngolu khetho, ukuthengwa okuhlanganisiweyo kuya kuqhubeka kusebenza kodwa kuya kuhlala kufuneka ufake ipassword, nokuba uyifakile umzuzu odlulileyo.
Khubaza ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo: Olona khetho lukhulu. Ukuba awufuni ukusebenzisa ukuthenga kwangaphakathi nohlelo, ungabakhubaza. Vala ngokulula ukhetho "Ukuthenga kwi-app" njengoko kubonakala emfanekisweni kwaye akusayi kuphinda kubekho ngxaki kuba awuzukukwazi ukuthenga nantoni na ngaphakathi kwesicelo nokuba uyafuna.
Ezi zithintelo zibuyela umva, ngokucacileyo. Ukuziguqula, kuya kufuneka ungene kwimenyu kwakhona, faka iphasiwedi enamanani ama-4 oyilungiseleleyo, kwaye wenze utshintsho olufunayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 7 » Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nokuthenga ngaphakathi nohlelo
Ndiyabulela kakhulu! Iluncedo kakhulu, kuba bendingazi ukuba iyasebenza ngelo xesha.
UFrank Solis sitsho
Ndiyabulela ulwazi olufanelekileyo
Phendula uFrank Solis
Ukuba ndiyakhangela okanye ndiyabuza Zeziphi izinto ezithengiweyo ngokudibeneyo? Abakwazi ukuqala ngebinzana: "Ngokuqinisekileyo uyazi ukuba kuyintoni ukuThenga okuDibeneyo."
Icon Resizer: lungisa ubukhulu beempawu (Cydia)